Tolona ho an’ny fanovana – Ambositra : rotaka be ny tao Ambositra, naratra ireo mpianatra… | NewsMada
Tolona ho an’ny fanovana – Ambositra : rotaka be ny tao Ambositra, naratra ireo mpianatra…
Tao ny vaky loha, tao ny tapa-tanana sy naratra. Io ny vokatry ny sakoroka nateraky ny fitokonana nataon’ireo mpianatry ny lycée, omaly, tao Ambositra.
Ampolony ireo mpianatra sy mpampianatra naratra mafy omaly, vokatry ny rotaka tao an-tampon-tanànan’Ambositra. Tao ireo vaky loka, ny sasany tapa-tanana voavely kibay, ny hafa mangamangana ny vatany… Manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly ao Ambositra avokoa ireo maratra.
Nandrava ny sekoly ny mpiantry ny CEG Ankorombe omaly maraina. Niraradraraka ny tora-bato tamin’ireo sekoly nolalovan’izy ireo ary nandrahona ireo mpianatra sy mpampianatra mba hampiato ny fampianarana ary hanamafy ny tolona izy ireo. Anisan’ny lasibatra ny CEG Ambohimiadana sy Antamponivinany hatreny amin’ny lycée teknika. Ny sekoly sasany kosa namoaka moramora ny mpianatra mba tsy hisian’ny korontana sy fanimban-javatra.
Nitondra kibay sy zava-maranitra ireo mpianatra nandrava sekoly omaly. Manginy fotsiny ny teny fandrahonana ho an’ireo izay mbola minia manohy fianarana.
« Miala Rajao » ! « Tsy mila Paul Rabary”! “Mangataka bourse izahay mpianatry ny lycée”. Ireo no hita tamin’ny sora-beventy nentin’ireo mpianatra tao Ambositra omaly rehefa niray loha fa hitolona ihany koa ho amin’ny fanovana. Niaraka tamin’ny herisetra sy sakoroka anefa izany tolona izany ka lasa ny samy mpianatra no nifandramatra.
Tsy mbola fantatra hatreto izay ao ambadik’ireo mpianatra sy nanome saina azy ireo handrava sekoly toy izao. Niezaka nandamina ny lehiben’ny fari-piadidiam-pampianarana tany an-toerana saingy tsy nohenoin’ireo mpianatra akory izany.
Teo ihany koa ny mpitandro filaminana saingy vitsy anisa ka nitazam-potsiny nanoloana ireo mpianatra efa miaraka amin’ny kibay…
Nisafidy tsy handefa ny zanany any an-tsekoly ny ankamaroan’ny ray aman-dreny anio ho fitandroana ny ain’izy ireo. Feno herisetra rahateo ny fitakiana sy ny tolona ka aleon’izy ireo mampandefitra ny fianaran-janany aloha mandra-pilamin’ny raharaha.
Miitatra any amin’ny faritra ny fitokonana. Anio koa ny solombavambahoakan’ny fanovana milaza fa hamoaka ny mpianatra eny amin’ny oniversite. Manomboka taitaitra ny any amin’ny faritra ary tsikaritra fa mahazo olona ny famoriam-bahoaka izay hataon’ireo solombavambahoaka any raha toa ka somary matoritory ny eto Antananarivo.
Une réponse à "Tolona ho an’ny fanovana – Ambositra : rotaka be ny tao Ambositra, naratra ireo mpianatra…"
RANDRIANIRINA Jean Clément 16/05/2018 à 16:48
Fanirianay ny mba tsy hikantonan’ny MFB izay mikarakara ny karama.